32 iPhone iyo iPad Tricks Aan aad u ogaataan
Kasta oo iPhone iyo iPad user waa in ay ogaadaan in geeddi-socodka ay ogaadeen oo dhan tricks waxtar leh in la samayn karaa qalabka this laga yaabaa inay qaadato muddo dheer. Si loo fududeeyo habka this, waa in aad ka akhrisan soo socda 32 tricks:
1. Hel helitaanka calculator sayniska
Si aad u hesho calculator sayniska, waxaad u baahan tahay haddii dhinac.
2. Delete lambar ee ugu danbeysay ee calculator
Waxaad si fudud u mari karaan guud ahaan gaabnaa waxaa ka labada dhinacba ay dhacdo in aad rabto in aad soo kaban ama tirtirto lambar ee la soo dhaafay.
3. Sida loo sameeyo diirada raadinaya
Si aad u hesho macluumaad fududahay in qaar ka mid ah gaar ahaan ku keydsan gudaha telefoonka, sida laga daadiyo, xiriirada, fariimaha, dhacdooyin, heeso, iwm helitaanka, waxaad u baahan tahay in nooca oggayn in ikhtiyaarka diirada raadinta. Phone ayaa si toos ah baadhi doonaa internetka si aysan u hesho macluumaad ka hagi ka telefoonka. Waxaad heli kartaa Goobta> General> Barta bartamaha Search in la shakhsiyeeyo raadinta sida ay baahidaada. Mar kasta oo aad rabto in aad samayso si dhaqso ah, aan fariin u dirno ama aan ka helo song gaar ah ee aad taleefan, aad si fudud u isticmaali kartaa Search Spotlight.
4. Sida loo helo tabs dhawaan la xidhay ee Siri
Helitaanka liiska tabs dhawaan la xidhay ee Safari waa suurto gal adigoo riixaya oo haysta button + loogu tabs cusub. Doorashadan waxa laga heli karaa iPad.
5. Isticmaal Sameecadaha iyo mugga ilaa Button in ay sawiro iyo videos qaataan iPhone
Si aad u qaadato sawir, aad si fudud u riixi kartaa mugga + button aad Apple. Si aad u qabsadaan qaar ka mid ah daqiiqado weyn in hab video, waxaad isticmaali kartaa badhanka dhexe ee ku hari dhegta.
6. Sida loo xiro birta ku multitasking
Waxaad isticmaali kartaa saddex farood in la xiro saddex codsiyada kala duwan ka bar ah multitasking oo dhan hal mar. Tani waxay khusaysaa ku qalabka ku ordi iOS7.
7. Isticmaal lambarkan si ay muujin qaab xoog
Si aad fursad bar signal in tiro taban in ay muujiyaan doonaa codku ka tixraacooda mid ku shiidi doona watt ah, waa in aad wacdaa lambarka ku xiga oo buuxi Test Field ah: * 3001 # 12345 # *.
8. Isticmaal Saacad in ay joojiso loo maqli music
Isticmaal "Jooji ciyaaro" doorasho ka Saacad ah in marka ay u joojiyaan loo maqli music on qalab aad ka. Tani waxay noqon kartaa run ahaantii waxtar leh ay dhacdo in aad rabto in aad hurudo in music.
9. Soo hel GPS a Free by helitaanka Google Maps
Ma jirto baahi ah qorshaha xogta caalami ah si ay u isticmaalaan Goggle Maps sida GPS oo lacag la'aan ah. In offline habka, waxaad u baahan tahay inaad ku qor "maps ok" sanduuqa raadinta ka dib markii aad Asakrtii ee aagga map a. Waxaad isticmaali kartaa habkan xitaa haddii aadan haysan in ay helaan isku xirnaanta xogta. Fadlan ku shuban macluumaadka map guriga marka aad ka heli kartaa internetka.
10. Isticmaalka Telefoonka ugu App garaacdaa dheeraad ah si toos ah
U kala bedesho laba calls iyadoo la kaashanayo doorasho Lambarka Telefoonka hako ah. Ha welwelin, wac ugu horeysay ee la gula dhamaadka - waxaa la gelin doonaa si fudud ku qabsaday. Riix badhanka bilowga si ay u helaan Doorashadan ka dib markii aad loo yaqaan tirada hore. Waxaad arki doontaa comma ah! Ku qor lambarka ku xiga in aad rabto in aad wici!
11. Helitaanka icon degree by haysta 0
Habkaani waxaa laga yaabaa in loo baahdo haddii aad akhrineyso mowduuca ah oo la xiriira cimilada ama kiimikada. Si aad u helaan, si fudud wax miiran iyo qaban 0 badhanka.
12. Sidee si ay u helaan Mode suulka
Mase aad keyboard in hab suulka on your iPad lagana yaabo in aad makiinada. Si tan loo sameeyo, kaliya aad u baahan tahay in aad mari labada farood ee guud ahaan keyboard ah.
13. Ku qor xarfaha waawayn si fudud
Si toggle kulan ee si joogto ah aad xirtid, aad si fudud u baahan tahay inay hesho waawayn ee arrow laba jeer oo isku xigta.
14. Tricks la xiriira tuuryo
Waxaan dhamaanteen u isticmaalaan erayada qalaad, characters ama calaamado cajiib ah, ama saxiixyada u gaar ah marka aan ku qor fariin gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay noqon karaan kuwo ku niyad si ku celcelis ah u qori xuruufta adag tahay mar kasta oo loo baahdo. Isticmaalka "tabo gaaban" doorasho lagana yaabo in shaqada. Fiiri Settings> General> keyboard> tuuryo iyo telefoonka baro qaar ka mid ah tuuryo joogto ah.
15. dhaqaajiso xiriiri caawisay
Doorashadan waxa ku soo dejin doonaa dhibic cad weyn on your screen midig ka dib markii aad u dhaqaajiso ka goobaha Helitaanka ah. Waxaa aad u faa'iido badan marka ay dhibaato kaa haysato taabashada shaashadda ama marka aad qabto badhanka guriga jabay.
16. Save markii amraya by kaakicin Diyaaradeed Mode ah
Tani waa mid aad waxtar u leh marka aad ka maqan tahay mar ama marka aad safraysid. Qalab aad ka qaadaan doonaa laba jeer sida ugu dhakhsaha haddii aad dhaqaajiso hab diyaaradda.
17. Isticmaalka feature helitaanka
Si aad u hesho Doorashadan, waxaad u baahan doontaa in aad soo booqato Settings> General> Helitaanka oo u soo jeesan ku feature Access hagayo. Ilmaha A tirtirto laga yaabaa in file ka telefoonka, ama ay u helaan barnaamij muhiim ah oo qalad ah, iyo habkaani ka hortagi doontaa arrimaha sida.
18. Isticmaal hal click si ay u gaaraan sare ee shaashadda ah
Tani waa suurto gal ah si fudud looga faa'idaysan bar sare ee codsiga kasta oo aad u adeegsadaan waqti gaar ah.
19. Change heeso ka Earbuds aad
Dhaqaaq song hore ama kan ku xiga ee aad playlist adigoo isticmaalaya fog ee earbuds aad.
20. si deg deg ah saar Ogeysiinta Banner ah
Tan waxaa la samayn karaa si fudud by kabacdi wargelinta ka xaq u leedahay in dhankiisii ​​bidix iyo aad shaashadda.
21. Switch dhexeeya Camera iyo Photo
2 Waxaad ku samayn kartaa kabacdi qalab aad ka bidix ilaa midig. Waxaa aad ugu sahlan yahay siyoodba on thumbnail Roll Camera ah.
22. Sida loo isticmaalo ee AE / xeeraan Lock
Qaadashada sawir ee xaaladaha nalalka saboolka ah waxaa laga yaabaa run ahaantii adag. Ma iyadoo la kaashanayo ku Focus & fursadaha xir-gaadhista. Simple toggle shaashadda iyo hay dhawr ilbidhiqsi si ay u helaan Doorashadan. Riix shaashadda mar kale in ay sii daayaan hawsha.
23. Sidee si ay u helaan aragtida widescreen ah
Si aad u hesho aragti widescreen waxa aad diiwaan waqti gaar ah, si fudud u helaan app Camera ah, hab Sawir la xusho oo double tuubada shaashadda.
24. Sidee qasi khaanada effortlessly
Si fudud gilgil qalab hal mar, ka dibna dooro tirtireyso makiinada in ay tirtirto mid ama ka badan farriimo isku mar.
25. Sida loo badbaadiyo nolosha Battery
Deminta sifooyinka soo socda kaa caawin kartaa inaad qaar ku badbaadiyo Battery Life marka uu u yaraatey: Adeegyada Goobta Wi-Fi, Bluetooth,, 3G, LTE, gariirka, Auto-dhalaalka, iyo keen New Data.
Marka aad dami kala dooranayo, weli awood u yeelan doonaan in la sameeyo / gudbiyaa telefoonada, fariimahu diro ama caleenta Internetka la xiriir EDGE ah aad.
26. Sidee loo qaab e-mail Content
Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la muujiyo qoraalka ka content in aad rabto in qaab iyo ka jaftaa arrow ikhtiyaarka. Waxaad dooran kartaa ka Geesi, farta itaalikska, oo hoosta ka xariiqay in xaalkaa qoraalka lagu muujiyey.
27. Isticmaalka qoraalka Text-ka-hadalka
Marka laga haddii aad rabto in aad ka baran dhawaaq eray cusub ama in aad iPhone akhri qayb gaar ah oo maqaal aad u, si fudud u dhaqaajiso shaqo "Text-ka-hadalka".
28. Abuur sirta random la Siri
Waxaad u baahan tahay oo kaliya si aad u bilowdo Siri gargaar codka Ninkanu ereyada "password random". Codsiga waxaa si toos ah ay abuuri doonaan password 8 qof ah. Xitaa waa inaad ku labanlaabtaa karaa dhererka ay ku daray 16 characters dhamaadka weedha ah.
29. tilmaamaha Change toogashada codsiga Panorama ee
Waxaad qaadan kartaa sawir Panorama ka xaq u leeyahay inuu ka tagay ama ku-xigeen qeybsanaan ah si fudud looga faa'idaysan fallaadhihii oo bedesheen jihada toogashada.
30. Abuur habayn ah alphanumeric
Habayn ah alphanumeric Dejinta kordhin kartaa ammaanka qalab aad. Booqo Settings> General> habayn Lock si ay u abuuraan habayn cusub!
31. Samee ¢ by haysta hoos u muhiim ah $ ah
QABASHADA hoos u muhiim ah $ oo aad ka heli karto ¢.
32. Save markii keyboard wareejin ka tiro ahaan si xarfaha
Haddii aad rabto in aad tubbada "123" button, sii fartaada shaashadda, iyo jiidi fartaada in tirada ama xarakayn in aad rabto in aad isticmaasho, ka dibna sii daayo fartaada ka shaashadda waxaa soo xuli doona item in oo isla goobtii ku noqon, keyboard ka dib si ay alifbeetada oo aan haysan si tuubada "ABC" button. Asal ahaan waxaa idinka Koriya click iyo kuu ogolaanaysaa inaad ku qor fariimaha dhakhso. Laakiin waxa ay u muuqataa u baahan tahay in aad ku darto keyboard cusub oo aad iPhone oo aad u baahan tahay si loo hubiyo in ay jirto tiro icon in button alifbeetada sida 5 ee JKL button hoos ku qoran.
3. Qabashada diirada raadinaya
4. Inaad hesho ka tabs dhawaan la xiray
5. Isticmaal headphones iyo mugga ilaa button
6. Xir birta ku multitasking
7. Isticmaal lambarka si ad qaab xoog
8. Isticmaal saacada si ay u joojiyaan loo maqli music
10. Wac waqti dheeraad ah si toos ah
16. Guddi Diyaaradeed Mode ah si loo badbaadiyo waqtiga
18. Mid ka mid ah click si ay u gaaraan sare ee shaashadda ah
29. tilmaamaha Change toogtay
32. Shift keyboard ka tiro ahaan si xarfaha
> Resource > iPhone > 32 Tricks ee muhiimka ah in aad isticmaali karto on Your iPhone / iPad